ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင် နိုင်ငံခြားသားနှစ်ဦး ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား - Myanmarload
ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင် နိုင်ငံခြားသားနှစ်ဦး ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် က 09:59 November 07, 2016
ရန်ကုန်မြို့ ကျောက်တံတားမြို့နယ် အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံသား အချင်းချင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း အဆိုပါမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် ညနေ ၅ နာရီခန့်က သာကေတမြို့နယ် အမှတ် (၈) ရပ်ကွက်ရှိ မြခွာညိုအိမ်ရာတွင် နေထိုင်သော တရားလိုဖြစ်သူ ထိုင်းနိုင်ငံသူ Mrs. Supatchaya Sichompoo နှင့် ၎င်း၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား Mr, Peter Gary Ferguson (၄၇ နှစ်)တို့သည် မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြသော ကျောက်တံ တားမြို့နယ် အမှတ် (၈)ရပ်ကွက် ၃၉ လမ်း (အလယ်ဘလောက်)ရှိ အမှတ်(၁၆၀) ပထမထပ်တွင် နေထိုင်သူ Mr. Harris John Italo Binotti (၂၅ နှစ်) (ကျူးလွန်သူ)နှင့် ၎င်း၏ ချစ်သူဖြစ်သူ Mrs. Elsie Devolder တို့နှင့် အတူ သာကေတမြို့နယ် ရှုခင်းသာလမ်းပေါ်ရှိ Up Town ဟိုတယ်ရှိ ပါတီပွဲ သို့ အတူတကွ သွားရောက်ခဲ့ကြကြောင်း၊ ထို့နောက် ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှာ ပါတီပွဲမှ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ Mr. Harris John Italo Binotti ၏ နေအိမ် သို့ လိုက်ပါသွားခဲ့ကြောင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက် နံနက် ၄ နာရီခန့်တွင် ကျူးလွန်သူ ၏ ချစ်သူဖြစ်သူ Mrs. Elsie Devolder မှ တရားလိုထံသို့ ဖုန်းဆက်ပြီး Mr. Harris John Italo Binottiနှင့် တရားလို၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူတို့ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား နေကြောင်း ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားခဲ့သည်ကို သိရှိခဲ့ရကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
ထို့နောက် ယင်းနေ့ နံနက် ၆ နာရီခွဲတွင် တရားလိုအနေဖြင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူထံသို့ ဖုန်းဆက်ရာတွင်Mr. Harris John Italo Binotti (ကျူးလွန်သူ)က ဖုန်းကိုင်၍ တရားလို၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှာ အိပ်ပျော်နေသည်ဟု ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီခန့်တွင် တရားလိုမှ ထပ်မံဖုန်းခေါ်ရာ မည်သူမှ ဖုန်းကိုင်ခြင်းမရှိ တော့ကြောင်း၊ တစ်နေကုန်ဖုန်းခေါ်နေသော်လည်း ဖုန်းကိုင်မည့်သူမရှိကြောင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၆ ရက် နံနက် ၆ နာရီခန့်တွင် (ကျူးလွန်သူ)၏ ချစ်သူဖြစ်သူ Mrs. Elsie Devolder မှ တရားလို၏နေအိမ်သို့ လာခေါ်သဖြင့် အခင်းဖြစ်နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိ လာရာတွင် တရားလို၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှာ အခန်းတွင်း၌ ပက်လက်အနေအထားအတိုင်း ဦးခေါင်းနှင့် ရင်ဘတ်တို့တွင် ဖူးရောင်ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း သိရသည်။
“သောကြာနေ့ ညပိုင်းမှာ အဲဒီအခန်းက ဆူညံတဲ့အသံတွေကြားရတယ်။ ဘာဖြစ် မှန်းတော့ မသိဘူး။ နိုင်ငံခြားသားတွေနေတာဆိုတော့ သိပ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ရင်းနှီးမှု မရှိဘူး။ ဒီနေ့မနက် ရဲတွေရောက်လာမှ လူသေတယ်ဆိုတာသိရတယ်” ဟု အဆိုပါ အခင်းဖြစ် တိုက်ခန်းအနီးမှ ပြည်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ် နှင့်ပတ်သက်၍ (ကျူးလွန်သူ) ဗြိတိန်နိုင်ငံသားMr. Harris John Italo Binotti အား ကျောက်တံတားမြို့မရဲစခန်းက (ပ) ၂၄ ၅/၂၀၁၆၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ-၃၀၂ အရ အမှုဖွင့်လှစ်၍ ကျူးလွန်သူအား ဖမ်းဆီးရမိရေး အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်တွင် ကျူးလွန်သူနှင့် သေဆုံးသူတို့မှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားများဖြစ်ပြီး ကျူးလွန်သူမှာ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက် ညနေပိုင်းက ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြောင်း ကနဦးသတင်းများအရ စုံစမ်းသိရှိရသည်။